Markan markaa, waxaan rajeynayaa inaad ku faraxsan tahay fursadaha aad sameyneyso tijaabooyinkaaga dijital ah. Haddii aad ka shaqeyso shirkad weyn oo tiknoolajiyadeed, waxaa laga yaabaa inaad marwalba tijaabinayso tijaabooyinkaas mar kasta. Laakiin haddii aadan ka shaqeynin shirkad tiknoolaji ah, waxaad u maleyneysaa inaadan kari karin tijaabooyinka dijitalka ah. Nasiib wanaag, taasi waa khalad: oo leh hal-abuurnimo iyo shaqo adag, qof walbana wuxuu tijaabin karaa tijaabin dijital ah.
Talaabada koowaad, waxa ay caawineysaa in la kala saaro laba waji oo muhiim ah: adigu iskaa wax u qabso ama wada shaqeyn xoog leh. Waxa kale oo jira siyaabo kala duwan oo aad naftaada u samayn karto: waxaad tijaabin kartaa deegaannada hadda jira, sameysaan tijaabadaada, ama aad u sameysid badeecad kuu gaar ah si aad u tijaabiso. Sida aad ka arki doonto tusaalooyinka hoos ku xusan, midkoodna maahan mid ka mid ah hababkan oo dhan, waxaana ugu fiicneyn in ay ka fekeraan iyaga oo bixiya ganacsi-baxyo afar qeybood oo waaweyn: qiimaha, xakameynta, xaqiiqda, iyo anshaxa (sawirka 4.12).
Jaantuska 4.12: Soo koobida suuqyada kala duwan ee siyaabo kala duwan oo aad sameyn kartid tijaabadaada. Qiimaha waxaa loola jeedaa kharashka cilmi-baarayaasha marka la eego waqtiga iyo lacagta. Iyada oo la xakameynayo waxaan ula jeedaa awoodda aad u leedahay inaad samayso waxa aad doonayso marka la eego kaqaybgalayaasha, kala xulashada, bixinta daaweynta, iyo cabirka natiijooyinka. Xaqiiqda dhabta ah micnaheedu waa xaddiga sida jawiga go'aanku uu ula kulmo kuwa la kulma nolol maalmeedka; xusuusnow in xaqiiqda sarreysa aysan ahayn had iyo jeer muhiim u ah tijaabinta aragtiyaha (Falk and Heckman 2009) . By anshaxa waxaan ula jeedaa awoodda cilmi fiican shir si ay u maareeyaan caqabadaha anshaxa darsa.